ဟက်ကော့ by ko zaw | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » ဟက်ကော့ by ko zaw
ဟက်ကော့ by ko zaw
Posted by zinmyotun on Nov 10, 2010 in Short Story | 8 comments
သိပ်မကြာသော ကာလတစ်ခုမှာ ကျွန်တော် မြို့ထဲသွားတော့ ဘေးနားမှာ မတ်တပ်ရပ်ရင်း ကောင်မလေး နှစ်ယောက်က သူတို့ဖာသာ စကားပြောနေကြပါသည်။ ထိုရပ်နေသော နေရာဟာ ကားမှတ်တိုင် ဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်တော်ကလည်း ရပ်ကာ ဘတ်စ်စောင့်နေပါသည်။ အတော်ကြာသည့် အထိ စီးချင်သော ဘတ်စ်က မလာပါ။ ထိုအချိန်မှာ စိတ်တွေက ဟိုလွင့်ဒီလွင့် တွေးနေရာကနေ အနီးအနားကို သတိလေး ထားလိုက်မိတော့ ထိုကောင်မလေး နှစ်ယောက် ပြောနေတဲ့ စကားတွေက နားထဲကို သူ့ဖာသာ စီးဝင်လာသည်။ အရင်ကလည်း ဝင်နေနိုင်ပေမဲ့ ကျွန်တော် သတိမထားမိတာ ဖြစ်မည်။
“ အဲဒီတော့ ဘာဖြစ်သွားလဲ။ ”
“ ဘာမှ မဖြစ်ဘူးလေဟာ . . နင်တို့ ပြန်ဝင်လာတော့ သူက ဆက်မပြောတော့ဘဲ။ ဟိုပြော ဒီပြောနဲ့ ရပ်သွားတာပေါ့။ နင်တို့က သာသနာဖျက် တွေလေ။ ”
“ သြ . . ငါတို့ကလည်း ရှောင်ပေးတာပဲလေ။ နင့်လူကကို ပြောဖို့ ကြာနေတာ။ ”
“ အေးလေ ဟုတ်ပါတယ်။ အခုတော့ သူက ပြောခါနီးမှ ဆက်မပြောတော့ ငါ့မှာ “ ဟက်ကော့ ” ကြီး ကျန်နေခဲ့တာပေါ့ဟာ။ ”
“ x x x x x ”
သူတို့ ကတော့ သူတို့ ဖာသာ ဆက်ပြောနေပေမဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ တော်တော်ကို ရှက်သွားသည်။ ဒီလိုပဲ ကျွန်တော် အရင်က ကျောင်းသား ဘဝတုန်းကလည်း သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ကျောင်းကို လာရင်း သူတို့ တစ်ခါပြောတာကိုလည်း ကြားခဲ့ဖူးသည်။ အဲဒီတုန်းက သူတို့ နှစ်ယောက် လျှောက်လာရင်း ဘေးနားကနေ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်က လိုက်ပြီး စကားပြောနေတာကို ကျွန်တော်တို့နဲ့ မျက်နှာချင်းကနေပြီး တွေ့ရသည်။ နောက်တော့ ကျွန်တော်တို့ကို မြင်တော့ ဘေးကနေ လိုက်စကားပြောနေတဲ့ ကောင်လေးက လှည့်ပြန်သွားပါတော့သည်။ နှောင့်ယှက်တယ် ဆိုပြီး တိုင်တော ပြဿနာ ဖြစ်မှာ စိုးလို့ ထင်ပါသည်။
ဒါကို ကျွန်တော်တို့ အနားလည်း ရောက်ရော သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ထဲက သူ့ကို လိုက်ပြီး စကားပြောခံရသူက သူငယ်ချင်း အချင်းချင်းဆိုတော့ နောက်ပြီး လှမ်းပြောသည်။
“ နင်တို့ကို တွေ့လို့ ပြန်လှည့်ပြေးသွားတာ . .အဟိ . .သနားလိုက်တာဟယ်။ ”
“ အောင်မာ . .နင်က ကြည်နူးနေတာပေါ့လေ။ ”
“ ကြည်နူးတယ်တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟာ။ သူက တော်ကီ ကောင်းတယ်ဟ။ ဒါကြောင့် သူပြောရင် နားထောင်လို့ ကောင်းလို့ နားထောင်နေတာ ၊ သူ့အပေါ်ကတော့ ဘာစိတ်မှ မရှိပါဘူး။ ”
“ ဟာ. . . ဒါတော့ မကောင်းဘူးဟ။ မကြိုက်ရင် မကြိုက်ဘူး။ နင်တို့ ပြတ်ပြတ်သားသားပဲ ပြောရဲရမှာလေ။ သူကတော့ သူ့ဘက်က အဆင်ပြေနေပြီ ဆိုပြီး ထင်နေတော့မှာပေါ့။ မဟုတ်တာပဲ နင်တို့က. . . ”
“ မဟုတ်တာဘဲ လုပ်မနေနဲ့။ အခုတော့ နင်တို့ကို တွေ့လို့ လှည့်ပြေးသွားတော့ ငါ့မှာ နားထောင်ရ ပျက်ပြီး “ ဟက်ကော့ကြီး ” ကျန်နေခဲ့တာပေါ့။ ”
“ ဘာ . . . ဘာကျန်တယ်။ ”
“ ဟက်ကော့လေ. . ဟက်ကော့ကြီး ကျန်နေခဲ့တာပေါ့။ ”
“ နေစမ်းပါဦးဟ။ ဟက်ကော့ ဆိုတာကို နင်က ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ် ကောက်နေလို့လဲ။ ဟက်ကော့ဆိုတာ ဘာလို့ နင်က ထင်နေလို့လဲ။ ”
“ အမ် . . မသိဘူးလေ။ ဟက်ကော့ ဆိုတာ တိုးလို့တန်းလန်း ၊ မပြီးပြတ်ပဲ ကျန်နေတာကို ပြောကြတယ်ပဲ ထင်နေတာပဲလေ။ ဒီလို မဟုတ်ဘူးလား။ သူများတွေ ပြောလို့ လိုက်ပြောတာလေ။ ”
“ အေး ဟုတ်တယ်။ ဟုတ်တော့ ဟုတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီဟက်ကော့ ဆိုတာ . . .X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X အဲဒီလို မို့လို့ ဟက်ကော့လို့ ခေါ်ကြတာ။ ဒါကို နင်တို့က မသိလို့ ဒါကို လိုက်ပြောနေတော့ အခု သူက လှည့်ပြန်သွားတော့ နင်တို့ ဆီမှာ အဲဒါကြီး ကျန်နေခဲ့လို့လား။ ”
“ အယ်. . .”
“ ဟယ်တော့. . ”
အဲဒီနေ့ကတော့ ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းတွေ ဆိုတော့ အရှိအတိုင်း ပြောချမိပါသည်။ အခုတော့ အွန်လိုင်းမှာ ဆိုတော့ ကျွန်တော် ချမရေးရဲပါ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော့်နေရာမှာ ကျွန်တော့်ထက် အသက်အရွယ် ၊ အသိပညာ အတတ်ပညာ မြင့်သော လူပုဂ္ဂိုလ်များ ၊ ရဟန်း သံဃာတော်များဟာ ကျွန်တော့်စာဖတ် ပရိတ်သတ် ဖြစ်နေသောကြောင့် ကျွန်တော် မရေးရဲပါ။
မရေးရဲပေမဲ့ မပြောပြန်တော့လည်း မမြင်ဘူး ဖြစ်မှာ စိုးလို့ ကျွန်တော် နည်းလမ်းတော့ ပေးပါ့မယ်။ ဒီလိုလေး လိုက်လုပ်ကြည့်ပါ။ ကိုယ့် Browser ရဲ့ Address Bar မှာwww.google.com/images လို့ ရိုက်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Search Images နေရာ ဘောင်ကွက်လေးထဲမှာ hardcore ဆိုတာကို ရိုက်ထည့်ပြီး Search ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ပုံတွေ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီပုံတွေဟာ တကယ့်အစစ်ပုံတွေကို ရှာပေးထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ Google ကနေ အလိုလို ညစ်ညမ်းပုံတွေကို စစ်ထုတ်ပေးထားပါသည်။ ဒါကို ကိုယ်ရှာချင်တဲ့ ပုံအစစ်အမှန်ကို ရအောင်လို့ ဆက်လုပ်ကြည့်ပါ့မယ်။
အခုလို ရှာလို့ ရလာတဲ့ အတိုင်း Search Box လေးမှာ hardcore ဆိုတာကို ရေးထားရဲ့ အတိုင်း Search ရဲ့ အောက်ကို ကြည့်လိုက်ပါ။ အပြာရောင်လေးနဲ့ ရေးထားသော Advanced Search ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် နောက်ထပ် စာမျက်နှာ တစ်ခုကို ပြောင်းသွားပါလိမ့်မည်။ ထိုအထဲက စာသားတွေ အများကြီးထဲမှ အောက်ဆုံးမှာ ရှိနေသော
SafeSearchNo filtering Use moderate filtering Use strict filtering
ဆိုတာမှာ သူက သူ့ဖာသာ အလိုလို Use moderate filtering ဆိုတာကို ရွေးထားပြီးပါ။ ညစ်ညမ်းပုံများကို စစ်ထုတ်မယ် လို့ ဆိုထားတာပါ။ ဒါကို ကိုယ်က မစစ်ထုတ်ဘူး ဆိုပြီး No filtering ဆိုတာရဲ့ ဘေးက Button လေးကို ပြောင်းလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ညာဘက်အပေါ်မှာ ရှိသော Google Search ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ယုံပါပဲ။ ( မဟုတ်သော ပုံတွေ ရှာတတ်အောင် နည်းလမ်းပေးနေခြင်း မဟုတ်ပါ။ )
အခု ကျွန်တော် ပြောတဲ့ အတိုင်း လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ စောစောက ရှာထားတဲ့ hardcore ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုပဲ အခုလို filter မလုပ်ထားတော့ ဘယ်လိုပုံတွေ ထွက်လာလဲ ဆိုတာ တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ အရင်က ညစ်ညမ်းပုံတွေ မပါသော စကားလုံးက အခုဆိုရင် အဲဒီလို ပုံတွေနဲ့ ပြည့်နေတာ တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ ဒါဆို “ ဟက်ကော့ ” ဆိုသော စကားလုံးက ဘာကို ဆိုလိုလဲ ဆိုတာ သဘောပေါက်သင့်ပါပြီ။ အညင်သာဆုံးသော စကားလုံးကို ရွေးပြီး ထုတ်ပြောရရင် . . . ဟုတ်ပါတယ် သူတို့ ထင်ကြသလိုပါပဲ။ တန်းလန်းဖြစ်နေသော အရာမို့လို့ “ ဟက်ကော့ ” ဆိုပြီး ခေါ်တယ် ဆိုပါစို့။ အခု သူတို့ ပြောနေတဲ့ ဟက်ကော့ ဆိုတာ အဲဒီလို တန်းလန်း ဖြစ်နေသော ( ကန်တော့ဗျာ ) “ ယောက်ျားအင်္ဂါ ” ကို ဆိုလိုချင်တာပါ။ ( ကျွန်တော် ညင်သာဆုံးနဲ့ အနီးစပ်ဆုံး ရေးပြရတာပါ။ မူရင်းကတော့ ကိုယ့်ဖာသာပဲ ဆက်စပ်ကြည့်ပါ။ )
ဒီလောက် ဆိုရင် သဘောပေါက် လောက်ကြပါပြီ။ မိန်းကလေးတွေ ပြောပြောနေတဲ့ “ ငါမှာတော့ ဟက်ကော့ကြီး ကျန်ခဲ့တယ် ” ဆိုတဲ့ စကားကို ကိုယ်က အဓိပ္ပါယ် မသိလို့ ပြောမိတယ် ဆိုပါတော့။ အဓိပ္ပါယ် သိသူ တစ်ယောက်သာ မိမိဘေးနားမှာ ရှိနေမယ် ဆိုရင်တော့ သူတို့ ဘယ်လောက်များ ရင်ထဲမှာ ရယ်ချင်နေလိမ့်မလဲ။ ဟုတ်တယ်လေ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ သူတို့ဆီမှာ ကျန်နေခဲ့တယ် ဆိုတာ “ ဟိုဟာကြီး ” လို ဖြစ်မနေဘူးလားဗျာ။ ခက်ကုန်တော့တာပဲ။ ဒါကိုပဲ လူကြားထဲမှာ တွင်တွင်ကြီး ပြောနေတော့ ဘယ်လိုများ နားလည်ပေးရပါတော့မလဲဗျာ။ ကဲ . . .သေချာလေး စဉ်းစားပြီး ပြောကြည့်ကြပါဦး။
“ ငါတော့ ဟက်ကော့ကြီး ကျန်ခဲ့တယ်။ ”
“ ငါ့မှာ ဟက်ကော့ကြီး ကျန်နေခဲ့တယ် ”
ဟူး . . . ဆောရီးဗျာ။ မရေးမဖြစ် သိစေချင်လို့သာ အညင်သာဆုံး ရေးပေမဲ့ ကျွန်တော် တကယ်ကို ရှက်မိပါသည်။ မိန်းကလေးတွေသည် ဒီစကားလေးကို ကိုယ်ကလည်း အဓိပ္ပါယ် သိပြီ ဆိုရင် ဆင်ခြင်သင့်သလို သူငယ်ချင်းတွေကို မပြောမိအောင် ပြန်ပြီး ပြောပြပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
( ဖြည့်စွက် >>> ဤစာမှ စကားလုံးကို ဆရာဦးဆင့်သူ ( မြန်မာစာ ) မှ သွန်သင်ပေးခဲ့ပါသည်။ သို့သော် မည်သည် အလွဲပင်မဆို ဆရာနှင့် မသက်ဆိုင်ပဲ ကျွန်တော်နဲ့သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။ )
မောင်ထွန်းရဲ့ ဟတ်ကော့က စာနဲ့ဘဲကြည့်လိုက်ရတဲ့
သိထားတာက … half cock လို့ပါ..။
ညီလေးဇင်မျိုးထွန်းရေ မြန်မာ့ပြည် မှာ ခိုးကူးတွေဘာကြောင့်ရှိနေ တာလဲဆိ့တာညီလေး သဘောပေါက်ပေါ့ ဒီလင့်လေးကို ဘယ်ဘလော့ ကာဆီက လဲဆိုတာ တချက် ဖေါ်ပြပေးစေလိုတယ် ခွင်ပြုချက် ရစေရင် kozaw357@gmail.com ကို လာလွင့်တောင်းသင့်တယ် လို့ထင်ပါတယ်…..။
@ nay phonelan ရေ..။ ကိုဇော် ဆိုတာလဲ ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ် တတ်တဲ့သူပါပဲ။တစ်ချို့စာတွေဆို ကြားဖူးနားဝနဲ့ ပြန်ရေးရတာမို့ ခရက်ဒစ်တောင် ဘယ်သူ့ပေးရမှန်း မသိရှာတဲ့သူပါ။ စာဖတ်မနာ ဘူးလို့ ပြောရမလားပဲ။
ဟက်ကော့လောက် မပြင်းထန်တဲ့စကားလုံးကတော့ ကွာတားကော့ပါ။
ဟက်ကော့ဆိုတဲ့စကားကို တော်တော်များများသုံးကြတယ်။ အခုလို ဘာသာပြန် ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။
Half cock ကပိုမှန်ပါတယ်လို့ ထင်ပါတယ် ဆိုတာ သေနတ် ကို ကျည်အပြည့်မထိုးပဲ ကျည်တ၀က်ပဲ ထိုးတာလို့ စစ်သားဟောင်း ကြီးထံမှ သိရပါတယ် ။ hardcore က ဟာ့ဒ်ကိုးလို့ အနီးစပ်ဆုံး အသံဖလှယ်လို့ ရပါတယ်။
တော်ပါသေးရဲ့ ကိုဇင်မျိုးထွန်းရေးပြလို့ပဲ ။ တော်တော်များများအဲ့ဒီအသုံးအနှုန်း
ကိုသုံးကြတယ်။ကိုယ်တောင်သုံးမိသေးလားပဲ .. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။